Ihe omimi: Web Scrapers. Ụzọ kachasị mfe iji Jiri Ngwá Ọrụ Weebụ Weebụ
Nchịkọta weebụ bụ usoro ma ọ bụ ngwanrọ mepụtara maka nbudata data site na ọtụtụ weebụsaịtị. Ebe ọ bụ na nchịkọta weebụ weghaara ọrụ n'etiti azụmahịa, saịtị ụfọdụ na-enye ndị ntanetị weebụ n'enweghị ihe ọ bụla mgbe nke ọzọ na-enye ha dịka ọrụ ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ. Otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị adaba bụ Web Scraper - automaatpesula.
With a Web akpụcha, ị nwere ike ịmepụta gị onwe gị na nchekwa data nke ụlọ ọrụ 'email na adreesị, ma ọ bụ i nwere ike ike gị ngwaahịa ma ọ bụ e-ụlọ ahịa katalọgụ. Otu n'ime uru kachasị mma a na-enye site na ngwá ọrụ a bụ na kọntaktị nke ụlọ ọrụ nwere ike ibudata n'amaghị ama site na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na ọsọ ọsọ na oke ziri ezi! Ọzọkwa, enwere ike ịchekwa ọdịnaya dị iche iche na ụdị dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche ka enwere ike iji ya n'oge ọ bụla ị chọrọ. Nke a bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ kachasị mma nke ngwanro ahụ.
Nkọwapụta Weebụ Web
Mkpuchi n'efu 14
Nchịkọta Weebụ na-eji nyocha n'efu n'efu ụbọchị 14. Nke a pụtara na ị nwere ike ịnwale software maka n'efu maka izu abụọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bụrụ na ịchọrọ ya, ịnwere ike ịzụta ya.
Ọ dịghị achọ ihe mmemme mmemme
Nchịkọta weebụ anaghị achọ ihe ọmụma nke asụsụ ọ bụla ma ọ bụ ederede. Ihe niile ị ga - eme bụ igodo ole na ole nke òké ma họrọ data achọrọ maka mmịpụta.
Ọ nwere ike ijikwa ọtụtụ ihe nchọgharị n'otu oge
Weebụ Web nwere ike weghachite data site na ọtụtụ ibe weebụ na otu ọsọ, ma ọ pụkwara ịrụ ọrụ na ọtụtụ nchọgharị n'otu oge ahụ. Nke a na-azọpụta oge na ike gị.
Ike iji wepụ data site na weebụsaịtị
Ngwaọrụ weebụ a nwere ikike iji wepụ data site na ndị savachite proxy ka ọ nwere ike ibudata ma wepu data si na ebe nrụọrụ weebụ siri ike ojiji nke sava usoro. Akụkụ a bara uru maka ụlọ ọrụ ndị na-ekpochapụ data site na weebụsaịtị dịka LinkedIn na Facebook.
Ọ nwere ike gbanwee data n'ime ọtụtụ ụdị
Ọ na-ebupụ data n'ime ụdị dị iche iche. Ọ nwere ike mbupụ data weghaara na TXT, XML, na CSV usoro dabere na ntụziaka onye ọrụ. N'eziokwu, ọ nwere ike ịgbanwe data ahụ n'ime ụzọ atọ dị iche iche.
Ọ na-enye interface interface enyi
Ngwá ọrụ ahụ na-enye ntinye uche dị mfe nghọta na njirimara, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa ka ị nweta ihe ọmụma ọ bụla nwere ike iji ya. Ịkwesighi izi nkuzi ma ọ bụ ngosi vidiyo iji ya.
N'ihi njirimara elu ya, ị nwere ike iche na ọ na-efu ego. Otú ọ dị, ọ na-abịa na ego kwesịrị ekwesị.
Dị na nsụgharị abụọ
E nwere nsụgharị abụọ nke Web Scraper. Ụdị nke mbụ nwere ike iji atụle onyinye na ngwaahịa ndị asọmpi. Edere nke abụọ maka mmịpụta nke kọntaktị. Ị nwere ike ịhọrọ nsụgharị nke dabara maka azụmahịa gị. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe ọhụrụ maka otu azụmahịa ịzụta ma nsụgharị. I nwekwara ike ime otu ihe ahụ iji nweta nsonaazụ kacha mma.
N'ikpeazụ, ebe ọ bụ na ịnweghị ihe ị ga-efu, gịnị ma ị ga-anwale ụdị mbipụta nke ụbọchị 14 ahụ. Ị nwere ike ịkwụsị ịzụta ya mgbe oge ikpe ahụ gasịrị.